DAAWO VIDEO: Sheekh Shariif ”Dalkan wuxuu u burburay Caddaalad darro, mana aqbaleyno‘‘! | HalQaran.com
Home Wararka Maanta DAAWO VIDEO: Sheekh Shariif ”Dalkan wuxuu u burburay Caddaalad darro, mana aqbaleyno‘‘!
Muqdisho (Halqaran.com) – Madaxweynihii hore ee Soomaaliya, Mudane Shariif Sheekh Axmed oo loo doortay in uu Hoggaamiyo Madasha Xisbiyada ay ku midoobeen qaar kamid ah xisbiyada siyaasadu, ayaa sheegay in aysan wali cadeyn nuuca doorasho ee dalka ka dhaceysa xili uu sii dhamaanayo waqtiga jiritaanka dowlada hada jirta.
Sheekh Shariif ayaa caddeeyay, in aysan marnaba aqbali karin in la aruuriyo koox loogu magac daray Xoogaga Wadaniyiinta kadibna doorasho lagu galo, waxa uuna xusay in aysan jirin wali wax laga heshiiyay oo ku aadan doorashada dalka ka dhaceysa.
Madaxweynihii hore ee Soomaaliya, Sheekh Shariif Sheekh ayaa sheegay in sababaha loo sameeyay Madasha Xisbiyada Qaran ay tahay sidii ay uga shaqeyn lahaayeen in dadku helaan cadaalad iyo wax heshiis lagu yahay, waxa uuna ka digay in awood wax lagu raadiyo.
Si kastaba, madasha xisbiyada qaran ayaa waxaa ku mideesan qaar ka mid ah xisbiyada dalka ka jira gaar ahaan xisbiyada Mucaaradka, waxaana xisbiyadan kamid ah Siyaasiyiin waa weyn ay kamid yihiin Sheekh Shariif, Xasan Sheekh iyo Shariif Xasan.
Halkan hoose ka daawo muuqaalka Khubadda Sheekh Shariif:
dalka u dumay
sir badan sheegay
axmed November 2, 2019 At 17:31
Cidaan meel bey la,yihiin. war chnes kaagii waa soo qaadatay, dibna wey adagtahay in lagu doorto, meel fadhiiso. waxaba laguu haystaa in aad badiina gadatay. wuu waalan yahay.